करिनाको छोरा तैमूरको हेरचाह गर्नेलाई डेढ लाख तलव – Online Nepalaja
February 1, 2021 98
काठमाडौं – बलिउड अभिनेत्री करीना कपूर परिवारका साथै आफ्नो काममा पनि व्यस्त छिन्। करीना कामबाट समय पाएसँगै आफ्नो छोरा तैमूरसँग समय बिताइरहेको देखिन्छन्। कुनै स्टारको छोराछोरी हुनुले कत्तिको अर्थ राख्छ भन्ने विषयमा जानकारीका लागि सैफ अली खान र करिना कपुरका छोरा तैमूरलाई हेर्दा हुन्छ । उनको लवाइ खुवाइदेखि चालढाल लगायतका विषयहरु निकै चासोका साथ हेर्न थालिएको छ । तैमूरसँगै उसको स्यहार गर्ने महिला पनि अक्सर देख्न सकिन्छ ।
यस्तोमा खासै धेरै चर्चामा नआएको विषय हो – तैमूरको स्याहार गर्ने महिलाको सुविधाहरु । धेरै संचारमाध्यमहरुमा करीनाले तैमूरको नैनीलाई डेढ लाख रूपैयाँ मासिक तलब दिन्छन् भनेर दाबी गरिएको थियो। एक अन्तरवार्तामा करीनाले तैमूरको सुसारेको तलबको प्रश्नमा भनेकी छन् – ‘ के साँच्चै? तर म यसको बारेमा कुरा गर्न चाहन्न ।’ २०१९ मा, करीना अरबाज खानको शो पिन्चमा करीनाले ‘तपाईको बच्चालाई खुशी र सुरक्षित राख्नको कुनै मूल्य छैन ‘ भनेकी थिइन् ।
तैमूरको हेरचाहका लागि राखिएको स्याहार गर्ने महिलाको नाम सावित्री हो । तैमूरको हेरचाहका लागि राखिएकी उनी धेरैजसो तैमूरको साथमा देखिन्छन् । सेतो ड्रेस र चस्मा लगाएर उनलाई तैमूरको हरेक सानाठूला चिजहरुको ध्यान दिनुपर्ने जिम्मेवारी रहेको छ । उनले तैमूरलाई आमाको कमी हुन दिएकी छैनन्। करिना कपुर विभिन्न फिल्मको काममा व्यस्त हुने गरेकोले उनको जिम्मेवारी उनले पूरा गर्ने गरेकी छिन् ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
छोरा तैमुरलाई जन्म दिएको करिब ४ वर्षपछि फेरि परिवारमा नयाँ सदस्य थप गर्न लागिएको खान परिवारले जनाएको छ । सैफले भनेका छन् ‘हामी हाम्रो परिवारमा अर्को एक नयाँ सदस्यको पर्खाईमा छौं भनेर खबर सुनाउन पाउँदा निकै खुसी भएका छौं । हाम्रा शुभचिन्तकका माया र समर्थनका लागि सधैं आभारी छौं ।’ करीना अभिनेता सैफ अलि खानकी कान्छी श्रीमती हुन् ।
Prevयीनै हुन लोकप्रिय गायिका अञ्जु पन्तका हुनेवाला श्रीमान , विवाह कहिले हुदै छ होला ?
Nextएकाबिहानै भूकम्पको धक्का